Fanodinkodinam-bola, ”Raharaha ”bois de rose”: voarohirohy ny olon’ny tetezamita sy ny fitondrana teo aloha - ewa.mg
Fanodinkodinam-bola, ”Raharaha ”bois de rose”: voarohirohy ny olon’ny tetezamita sy ny fitondrana teo aloha
News - Fanodinkodinam-bola, ”Raharaha ”bois de rose”: voarohirohy ny olon’ny tetezamita sy ny fitondrana teo aloha
Hiroso amin’ny tsy
fanekena ny tsimatimanota. Anisan’ny tsy maintsy hampidirina
amin’ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimierampirenena ny
hanenjehana ireo nanodinkodim-bola sy nanao ny tsy mety eto amin’ny
Nambaran’ny filohan’ny vaomieran’ny
Fitsarana avo (HCJ) eny anivon’ny Antenimierampirenena, ny depiote
voafidy tany Vohipeno, i Tsabotokay Honoré fa ampolony eo ho eo
ireo antontan-taratasy amin’izao fotoana izao. Anisan’ny ahiana tsy
ho afa-bela amin’izany ireo olona ambony tamin’ny fitondrana
Tetezamita sy tamin’ny fitondrana teo aloha. Mahavoasaringotra ny
sasany amin’irany ny momba ny andramena, ny
fanodinkodinam-bolam-panjakana, ny asa tsy natao nefa namoahana
“Mametraka izahay fa hitsara
araka ny feon’ny fieritreretanay, ary tsy handray baiko na avy atsy
na avy aroa amin’ny fandinihana ireo antontan-taratasy
fitoriana ireo mpitondra teo aloha ireo”, hoy izy.
Notanisainy tamin’izany ny vola notrosaina tamin’ny mpamatsy vola
mahazatra, ohatra: saika lasan’ireo nomena fahefana, na
olom-boafidy na olom-boatendry. Zava-baovao ny asan’ny vaomiera ary
mijery azy ny mason’ny Malagasy manontolo.
Tsy handray baiko na avy
aiza na avy aiza
Mazava ny teniny tamin’ny
fijoroan’ny birao: aoka tsy handray baiko na avy aiza na avy aiza
fa apetraka amin’ny feon’ny fieritreretan’ny tena ny raharaha mba
ho tombontsoan’ny Malagasy manontolo.
Anjaran’ny mpampaka-teny no miantso
ny vavolombelona sy ireo voakasiky ny raharaha. Avy amin’izany no
hahazoan’ny vaomiera mandinika ny raharaha: halefa eny anivon’ny
fivoriamben’ny Antenimierampirenena sa tsia ?
Tsiahivina fa hodinihina amin’ny
fivoriana ara-potoana faharoa hataon’ny Antenimierampirenena,
hanomboka ny 20 oktobra ho avy izao izany. Hanapaka ny
antontan-taratasy hodinhina sy halefa mialoha izany ny vaomiera.
Rehefa voadiniky ny vaomiera izany vao mandalo fivoriambe ary
halefa any amin’ny Fitsarana avo (HCJ).
L’article Fanodinkodinam-bola, ”Raharaha ”bois de rose”: voarohirohy ny olon’ny tetezamita sy ny fitondrana teo aloha a été récupéré chez Newsmada.
Antoko Maitso: “Tsy mbola misy mahavita ny vitanay hatramin’izao …”
Ny antoko Maitso, araka ny maha maitso azy, miasa ho an’ny tontolo iainana ao amin’ny distrikan’i Vangaindrano, manohy ny fambolen-kazo. Ny 15 oktobra 2020 teo, nizara fitaovam-pianarana miampy arovava sy orona ity antoko ity. “Mitsinjo ny fiarahamonina ny antoko, manamaivana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny, indrindra noho izao Covid-19 izao”, hoy ny mpandrindra nasionaly, i Haingosa Hortencia. Nanamafy ny mpandrindra nasionaly ny amin’ny fifanampiana ka hahavitan-javatra lehibe na miainga amin’ny kely aza, ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana.«Momba ny tontolo iainana manokana, tsy mbola misy mahavita ny vitanay hatramin’izao. Tratranay ny tanjona tao anatin’ny herintaona, nihoatra aza ny vitanay. Natrehinay ny doro tanety sy ny afo an-tanàna nefa tena miasa jamba rafozana izahay », hoy ihany i Haingosoa Hortencia. Na izany aza, manohy ny asany ny antoko Maitso, mametraka fahatokisana amin’ny filoha Rajoelina hitohizan’ny fiaraha-miasa hatrany am-boalohany niforonan’ireo antoko mivondrona manohana azy.“Misy fotoana hanginana, misy fotoana hitenenana”Tsy hita ao anatin’ny governemanta ankehitriny ny antoko Maitso ankehitriny, nafana fo tamin’ny fanohanana izao fitondrana izao ny taona 2018 tany amin’ny faritra Atsimo Atsinanana. « Nesorina izahay fa tsy niala, saingy misy ny fifandimbiasan-toerana, misy fotoana hanginana, misy fotoana hitenenana ». Mbola mifantoka amin’ny raharaha sosialy sy ny ady amin’ny Covid-19 ny antoko Maitso izao, hisy fotoana hiresahan’izy ireo bebe kokoa politika, araka ny nambaran’ny mpandrindra nasionaly.Nanazava Rtoa mpandrindra nasionaly fa tsy midika ho faharavan’ny Armada akory ny fandatsahan’ny antoko MMM kandidà amin’ny fifidianana loholona ho avy izao. “Ary ny antoko politika rehetra ara-dalàna, tokony handray anjara amin’ny fifidianana. Izay ny maha antoko politika, mandala ny demokrasia”. Ny antoko Maitso kosa, nisafidy ny tsy handatsaka mihitsy hitazonana ny teny nifanarahana hatramin’ny voalohany, manohana ny kandidà iraisana avy amin’ny antokon’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ilay vovonana, ny Armada. R.MathieuL’article Antoko Maitso: “Tsy mbola misy mahavita ny vitanay hatramin’izao …” a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana loholona: efa maka bahana ny TGV
Miasa mangina ary efa maka bahana amin’ny fiaingana. Nambaran’ny mpitantana iray eo anivon’ny TGV/Mapar, omaly, fa efa miomana amin’ny hiatrehana ny fifidianana loholona izy ireo amin’izao fotoana izao. Efa napetraka ny mason-tsivana amin’ny ho kandidà harotsaka amin’izany, araka ny nambarany. “Tsy maintsy mba mpikambana eo anivon’ny TGV/Mapar sy tia tanindrazana ary olon’Andriamanitra. Tia manampy ny hafa ary vonona hiaro ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka malagasy…”, hoy izy. Nohitsiny fa hanana kandidà amin’ireo faritany enina izy ireo amin’izao fifidianana loholona izao. “Ho hita eo ihany ary hampahafantarina ny kandidà atolotray amin’ny fotoana mahamety azy…”, hoy ihany izy.Tsiahivina fa hanomboka, afaka 14 andro, ny 28 septambra ka hatramin’ny 12 oktobra izao, ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina eny anivon’ny Ovec.Synèse R. L’article Fifidianana loholona: efa maka bahana ny TGV a été récupéré chez Newsmada.
Tae-kwon-do ITF – «3rd Open Asian championship»: nandrombaka medaly volamena i Rado sy i Orima
Nanakoako tany ivelany indray, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny hiram-pirenena malagasy. Nandrombaka medaly volamena, teo amin’ny taranja tae-kwon-do ITF, mantsy i Rado sy i Orima, nandritra ny “3 rd open Asian championship”. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny “stade Talkatora Indoor Stadium”, tao New-Delhi, India, ny zoma 30 mey sy ny asabotsy 1 jona, lasa teo.Voahosotra ho tompondaka, Andriamirado Heriniaina, teo amin’ny ady na «kirougi». Resiny teo amin’ny famaranana, ho an’ny sokajy – 70 kg, ilay Indianina, Prasad Rakesh,. Tamin’ny isa, 4 no ho 0 no nibatan’i Rado, ny fandresena, tamin’izany. Mbola nanao “poomsae”, na kata ihany koa izy avy eo ka nahazo ny medaly volafotsy.Nahazo ny medaly volamena ihany koa Razanajatovo Orima, teo amin’ny “kirougi”, latsaky ny 15 taona, sokajy – 50 kg. Teratany Indianina, ihany koa no lavony, tamin’ny isa, 3 no ho 1, teo amin’ny famaranana. Fahatelo kosa izy, teo amin’ny fifaninanana “poomsae”, izay niravahany ny medaly alimo. Firenena aziatika, 10 no niady izay ho lohany tamin’ity ka firenena nasaina manokana i Madagasikara.Raha tsy misy ny fiovana dia ho tonga ny zoma 7 na ny asabotsy 8 jona, ho avy izao, izy ireo. TorcelinL’article Tae-kwon-do ITF – «3rd Open Asian championship»: nandrombaka medaly volamena i Rado sy i Orima a été récupéré chez Newsmada.
Hiasa amin’ny sehatry ny fambolena sy fiompiana: mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina 41 nanao fianianana
41 ireo tanora amerikanina Mpilatsaka an-tsitrapo vaovao nanao fianianana, omaly, tao amin’ny fonenan’ny Ambasadaoro amerikanina. Hiasa hanampy ny vahoaka malagasy, araka ny toky nomeny izy ireo, eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, ary ny fahasalamana. Eo amin’izay fambolena sy fiompiana izay indrindra ny ahitana maro anisa hiasa any amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana. Betsaka ny handeha any amin’ny faritra hafa.Hiara-hiasa amina vondron’ny mpamboly na fikambanana samihafa any amin’ny faritra misy azy avy ireo Mpilatsaka an-tsitrapo ireo, hitondra fampivoarana any ambanivohitra, hanatsara ny fomba fiasa hampitombo ny vokatra sy hiarovana ny tany. Raha fintinina, hanampy ny Malagasy amin’ny ady amin’ny fahantrana, indrindra ny any ambanivohitra.Mifandray amin’izay fampivoarana ny fambolena izay ny fitandroana ny fahasalaman’ny mponina, hanaovana ezaka hahatonga ny Malagasy afaka manohy ny asany eo amin’ny tontolon’ny fambolena. Navoitra ny fiarahan’izy ireo miasa amin’ny toby fitsaboana fototra (CSB). Manoloana izany, manentana ny Mpilatsaka an-tsitrapo ny tale eto Madagasikara, Vanessa Dickey, hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny tantsaha sy ny rafitra misy any amin’ny kaominina, mba hisy fiantraikany marina amin’ny fampandrosoana ny asa rehetra ataon’izy ireo.Hanampiana ny tany mahantraNiofana nianatra ny teny, ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao malagasy ireo tanora amerikanina ireo tany Mantasoa, nandritra 10 herinandro. Nanome toky izy ireo tamin’ny fianianana natao fa hanaja ny maha Malagasy sy mbola hianatra bebe kokoa mahakasika ny Malagasy. Filoha amerikanina John Kennedy no nanangana ny Mpilatsaka an-tsitrapo ny taona 1961, hifandraisana maneran-tany, sy hanampiana ny tany mahantra. Nanomboka ny taona 1993, 1 400 ny Mpilatsaka an-tsitrapo niasa teto Madagasikara. Roa taona ny faharetan’ny asa, misy amin’ireo nahavita tany aloha, miverina eto an-toerana ankehitriny. R.MathieuL’article Hiasa amin’ny sehatry ny fambolena sy fiompiana: mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina 41 nanao fianianana a été récupéré chez Newsmada.
Razana tao antrano :: Lehilahy hita faty ahiana ho nisy namono
Hita tao an-tranony ihany ny vatana mangatsiakan’ny lehilahy iray, 38 taona, mipe­traka eny Antetezana Afovo­any-Andavamanda, tamin’ny tolakandron’ny alahady lasa teo. Mampiahiahy ny faha­fatesany noho ny fahitana ratra teo amin’ny tarehiny sy ny tanany roa. Ahiana ho nisy namono izy. Nitolefika teo ambony fandriana ny razana, niala ny hodi-tavany, araka ny fitantaran’ny fianakaviana. Nitangorona ny olona tenyAntetezana Afovoany tamin’ny fahenoana fisiana olona hita faty tao amina trano iray. Nampilazana haingana ny fianakavian’ity namoy ny ainy. «Tany amin’ ny hopitaly mbola namangy fianakaviana marary izahay no nisy nampandre fa maty irery tao an-tranony i Hery. Efa ny vatana mangatsiaka no novantaninay », hoy ny fianakaviana mana-manjo. Niahiahy avy hatrany iretsy farany fa mety ho nisy namono io lehilahy io. «Niendaka toy ny nodidiana tamin’ny antsy ny tarehiny. Nahitana toy izany ihany koa ny tanany roa. Fotsifotsy sy efa niala ny hoditra ka taolana sisa. Nisy mandomando ny akanjony ambony. Nipetraka nitolefika no nahitana azy teo ambony fandriana», hoy Ravoaviniaina Jean Marie, zaodahin’ny maty. Tsy nikorontana ny tao an-trano, tsy mbola voafaritra ihany koa ny entana mety ho very na voaroba tao, tamin’ny fotoana nahitana ny razana. Manamafy ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) misahana ny fanadiha­diana fa mampiahiahy ny fahafatesan’io lehilahy io. Efa misy ny famotorana sy ny fakàna am-bavany ny olona rehetra ilaina amin’izany, toy ny vadin’ilay namoy ny ainy, ny fianakaviany, ny mpiara-monina sy ny olona nahitana ny razana voalohany. L’article Razana tao antrano :: Lehilahy hita faty ahiana ho nisy namono est apparu en premier sur AoRaha.
Efa mpamerin-keloka: tratra nisoloky olona ilay mpanendaka
Voasambotry ny polisy, ny asabotsy teo tetsy Avaradoha, ny lehilahy iray mpisoloky sy mpandray entana halatra. Misoloky olona amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “facebook” ihany koa ralehilahy. Milaza izy fa mivarotra findray ka roboka ny olona hividy izany. Rehefa tonga ny fotoana nifanaovana, milaza ilay mpanendaka fa iraka no mandeha mamonjy ilay mpividy. “Izy ihany anefa ilay voalaza ho iraka io fa tsy tiany ho fantratr’olona”, hoy ny fanazavan’ny Polisim-pirenena. Aorian’izay, entin’ilay mpanendaka io any amina toerana mangingina ilay olona mifanao fotoana aminy ka anaovany ny asa ratsiny. Vokany, lasa amin’izany ny vola sy ny finday. Rehefa izay, amidiny amin’ny namany eny Andravoahangy indray ny finday azony.Henintsoa HaniL’article Efa mpamerin-keloka: tratra nisoloky olona ilay mpanendaka a été récupéré chez Newsmada.
Lomano-Analamanga : fantatra, anio, ny datin’ny fifidianana
Ho fantatra aorian’ny fi­voriana iarahan’ny ligin’Ana­lamanga amin’ny fitaleavam-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahantena eto Anala­manga, tanterahina anio, ny daty hanaovana ny fifidia­nan’ny ligin’Analamanga, taranja lomano. Raha hiverenana ny fanazavana efa nambaran’ny filoha am-perinasa, Andrianjatomanitra Tojoha­nitra, tokony hatao amin’ny faramparan’ity volana oktobra ity, na ny fiandohan’ny volana novambra, ny fifi­dianana. Izany indrindra ny antony hanaovana ity fivoriana androany ity, handinihana ny fomba hanatante­rahana ny fifidianana sy ny fotoana ary ny toerana. Araka ny efa fantatra, tsy ho kan­didà intsony ny filoha am-perinasa, i Tojohanitra. Eo amin’ny taranja lo­mano hatrany, hatomboka ny 8 novambra no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 2020-2021. Aorian’izay, hisy ny fio­fanana ho an’ireo mpanazatra, hatao eto Antanana­rivo, ny 8 hatramin’ny 15 novambra, miaraka amin’andriamatoa Beunet, manampahaizana iraisam-pirenena. Ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika Seniors kosa ny fifaninanana iraisam-pire­nena voalohany hatrehina, hatao ny 3 hatramin’ny 6 de­sambra 2020 any Durban, Afrika Atsimo.Mi.RazL’article Lomano-Analamanga : fantatra, anio, ny datin’ny fifidianana a été récupéré chez Newsmada.
Mba mila mahay mankasitraka koa !
Tena ilaina ny kiana ! Tsy manana mari-pandrefesana ny mety na tsy mety hataony ny mpitondra raha tsy misy ny mpanohitra. Tsy voatery resa-politika, fa na ny kiana hanatsaran-javatra avy amin’ny vahoaka aza, ilaina dia ilaina tokoa. Any amin’ny firenen-kafa, ampirisihina mihitsy izay manan-ko lazaina mba hiteny izany fa tsy kobonkobonina irery any. Izay mahita ny tsy mety, ny tsy rariny, ny tsy ara-dalàna indrindra indrindra, tokony hahasahy hijoro miteny sy manohana ny heviny. Antoky ny demokrasia rahateo ny fahafaha-miteny. Azo lazaina fa malalaka tsara ny fitenenana, ny fanakianana, ny fanehoan-kevitra mifanohitra amin’ny an’ny mpitondra eto Madagasikara. Mazava loatra fa tsy maintsy misy ny hiteny hoe tratran’ny teritery sy fanampenam-bava. Tsy tao anatin’ny ara-dalàna mantsy ireny. Raha fanehoan-kevitra an-kalamanjana misy famoriana vahoaka, mila fahazoan-dalana, mazava loatra. Raha fanehoan-kevitra amin’ny tambajotran-tserasera, tsy tokony hivaona mankany amin’ny fandrisihana amin’ny fankahalana, na sanatria mankany amin’ny fanakorontanana. Fa mba ilaina ihany koa ny fankasitrahana… Tsy voatery hanakiana izay hataon’ny mpitondra foana ny mpanohitra. Zony tanteraka, ary mariky ny fifanajana anatin’ny tsy fitovian-kevitra koa ny fankasitrahana. Raha toa moa tanteraka ny faniriana, izay nangatahin’ny mpanohitra, dia hangina fotsiny ve? Fahalalam-pomba kely sy bitika indrindra ny misaotra, na dia hitady izay hirika hahafaha-manakiana indray aza? Tsy ny lafiny politika politisianina ihany… Mavaivay mihitsy ny kiana, mafonja ny fangatahana ary malaky mampiaka-peo ny vahoaka, rehefa misy tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy any anaty fiarahamonina any, toy ny fotodrafitrasa tsy zarizary, ny fampanantenana tsy vita, ny velirano tsy tontosa, sns. Fa raha misy kosa ny tombontsoa iombonana, mahafa-pahasahiranana, mitondra fandrosoana amin’ny maha olona sy ara-toekarena, angamba tsy fahadisoana ny mankasitraka. Ny tena zava-dehibe tsara afantsika ao an-tsaina: tsy voatery mpomba vao mankasitraka ary tsy mpanohitra ihany vao manakiana. Raha mahay mandanjalanja izay, tsy misy ady saritaka na tsy mitovy fironan-kevitra aza ny anaty fiarahamonina iray. Eny, misy ary azo atao tsara izany.Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Mba mila mahay mankasitraka koa ! a été récupéré chez Newsmada.
Angovo: hosokafana ao Ikongo ny fanodinana toaka gasy
Hisokatra any amin’ny kaominina Ikongo ny orinasa manodina toaka gasy, afaka volana vitsivitsy. Toaka gasy avadika ho éthanol azo arehitra, ampiasana amin’ny fatana, na andrehetana jiro. Fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombona antoka avy any ivelany ny hanokafana ity orinasa ity ary hisitraka izany koa ny distrika hafa ao amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany. Manana akora fototra azo hamokarana angovo azo havaozina, toy ny fary, ny ao amin’ny distrika. Fary avadika ho toaka gasy, avy eo, ahodina ho angovo azo arehitra. Fananganana orinasa ho fanomezan-danja ny vita malagasy sy famoronana asa ny tanora.Toaka gasy sotroina ihany ny fantatry ny maro, hatramin’izay, fa misy koa toaka gasy azo avadika ho zavatra hafa, angovo azo trandrahina. Efa nankatoavin’ny Antenimierampirenena rahateo ny famokarana sy ny fivarotana toaka gasy, koa ampirisihin’ny governoran’ny faritra, Razafitsotra Lucien, ny tantsaha hamboly fary sy hamokatra toaka gasy na firy na firy, tsy misy intsony manenjika azy ireo. Efa nisy mpandraharaha iray nampiseho ny fanodinana toaka gasy ho lasa éthanol. Ireo tantsaha ireo ihany no hivarotra ny vokatra amin’ilay orinasa mpanodina azy. Loharanom-bola iray goavana izany ny voly fary.Misy ihany koa izao ny sasany amin’ireo mpandraharaha ireo, miara-miombona antoka amin’ny mpamboly, mamatsy vola ho an’ny fambolena fary. Tafiditra anatin’izany ny fanitarana tany hiasana, ny fanofanana mpamboly, satria eo ihany koa ny voly hafa tsy azo avela, ohatra, ny kafe, izay tena nahafantarana ny faritra tany aloha, mila fanarenana ankehitriny. Mifandraika amin’izay fambolena izay ny fanamboaran-dalana, mampifandray ireo kaominina. Hatao rarivato avokoa izay tratra ary iangaviana ny ben’ny Tanàna rehetra hanolotra ny asa tokony hatao ny 2021 amin’ny governoran’ny faritra. Mety hampiova ny fandaharanasa ihany anefa izany noho ny fizarana roa eo amin’ny faritra: i Vatovavy sy i Fitovinany.R.MathieuL’article Angovo: hosokafana ao Ikongo ny fanodinana toaka gasy a été récupéré chez Newsmada.